प्रदीप ज्ञवालीलाई कोरोना संक्रमण, कस्तो छ उनको अवस्था ? - ramechhapkhabar.com
प्रदीप ज्ञवालीलाई कोरोना संक्रमण, कस्तो छ उनको अवस्था ?
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। उनले ट्वीटरमार्फत् आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिएका छन्। उनले कोरोनाको लक्षणसमेत भएको जानकारी दिएका हुन्।
‘केही लक्षणसहित कोरोनाबाट संक्रमित भएको छु। विगत चार-पाँच दिनदेखि मसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरुलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले ट्वीटरमा भनेका छन्। कोरोनासम्बन्धी लक्षण देखिए परीक्षण गराउन आग्रहसमेत गरिएको छ।
महासचिव ज्ञवाली कोरोना संक्रमित भएपछि नेकपा एमाले अधिकांश नेताहरु ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’मा परेका छन्। गत मंसिर २५-२६ गते पार्टीको दोस्रो पूर्ण बैठक बसेको थियो। बैठकमा ज्ञवालीको समेत सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा सहभागी भएका कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत नेताहरु ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’मा परेका हुन्।
कांग्रेस सभापतिका लागि पुनःमतदान सुरुः प्रधानमन्त्रीद्वारा मतदान
नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सभापति पदको पुनः मतदान सुरु भएको छ । सोमबार भएको निर्वाचनमा सभापति पदमा प्रत्यासी कसैको पनि ५१ प्रतिशत मत नपुगेपछि पार्टीको विधान अनुसार सभापति पदका लागि पुनःनिर्वाचन हुन लागेको हो । कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सभापति पदका प्रत्यासीमध्ये कसैको पनि कूल खसेको मतको ५१ प्रतिशत ल्याउन नसकेपछि आज अपरान्ह ३ः३० देखि साँझ ७ः३० बजेसम्म पुनः मतदान गर्ने तयारी गरेको समितिका संयोजक गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।